Umkhwekazi kunye nomalokazana-mkhwenkwe: i-psychology yobudlelwane
Ingxabano ekhoyo phakathi komama-mkhwenkwe kunye nentombi-mkhwenkwe ukususela ngexesha lokudalwa kwehlabathi kunencazelo yangempela. Ngokuqhelekileyo ibhinqa elidala liqhubeka malunga nobushushu bakhe, kwaye omncinci akafuni ukumqonda. Kodwa kutheni imiphefumlo emibini ehambelanayo iphandana ngokukrakra? Emva koko, bobabini nomkhwekazi nomalokazana bayamthanda umntu ofanayo, nangona benothando oluhlukileyo. Uvela phi, kule meko, yimbangela yokuba inzondo ithathwe? Ngoko, uninazala nomalokazana wakhe: i-psychology yobudlelwane ngumxholo wengxoxo namhlanje.
Nangona umama-mkhwenkwe kunye nentombi-mkhwenkwe bengabonakali ngaphandle ukungaboni nxamnye nomnye, ukuthetha kwabo ngokuqhelekileyo kubonakala kufana nesigxina sexeshana kunye nesigxina. Kwaye, njengoko kwaziwa, bobabini bahlanjululwe ngezenzo zamasosha ezonakalisayo kwixesha elizayo. Ngokombono weengqondo zengqondo, isizathu sobudlelwane, esele sibe yintetho yedolophini, sihlala sifihliwe kwiimpawu zobuntu "oomama wesibini". Ngoko ke, zonke iintombi zomyeni ongenakuziqhayisa ngobuhlobo obungenamntu nomyeni wendoda yakhe kufuneka ziqale ziqaphele uhlobo lomamazala, kwaye ngoko, ngoncedo lweengcebiso zengcali, zama ukunciphisa imeko. Ngokomgaqo, oku akunzima kakhulu. Kuya kuba nomnqweno. Emva kweengxowa-mali ezinkulu, izazi zeengqondo zahlula "umama" omama emacaleni amane.
Kuya kuchaneka ngakumbi ukubiza lo mfazi ungumnikazi. Lo mkhwekazi uyaqiniseka ukuba onke amalungu omndeni wakhe, oko kukuthi, umyeni wakhe kunye nabantwana bakhe, ngokungaxhomekanga kuye njengempahla ehambayo - ngokumalunga neendawo zakhe ezikhoyo, nokuba i-dacha, imoto okanye ezinye iimpahla zentlalo.
Olu hlobo lofakelo lubulula lula. Njengomthetho, loo mfazi uzinikela ngokuzithandela imisebenzi yeNtloko yentsapho, kwaye ngokukhawuleza ubamba isohlo wonke umntu ongena endlwini yakhe. Kodwa ku funeka kuqatshelwe ukuba oku kudla ngokukwenzeka ngokuzaliseka ngokupheleleyo kwindoda yentsapho. Amadoda-ahlotshiwe kunye noonyana baka-mama ngumveliso wokugqibela wokwandiswa kwendlu.
Ngoku khawucinge ukuba kwenzekani kulo mfazi xa efika ebusika e-dacha aze athabathe i-bum apho, okanye, egijima egcekeni kwi-alamu izandi, uthabathe umntwana osemva, othabatha imoto yakhe, ngomkhono. Ewe, uya kuqothula wonke umntu onqabileyo ukuba angene kwipropati yakhe! Kwaye ukuba ngaba kuyimfuneko ukuchaza ukuba ngendlela efanayo uya kumphatha umalokazana, ngubani, njengomlisela ongenalwazi, wathabatha waza wambamba kuye inkwenkwe exabisekileyo. Kule meko imeko iqhutyiswa yinyaniso yokuba abantu abangenamakhaya kunye nomgijimi bangahlawuliswa ngoncedo lwamagunya okuthotyelwa komthetho kwaye ngaloo ndlela banelisekise izikratshi. Yaye umalokazana entolongweni ngenxa yesitampu kwipaspoti, ngelishwa, awuyi kubeka. Kuhlala nje ukumbamba ilitye esifubeni sakhe kwaye uhlale nethemba lokuba uya kubuyela kwipropati ebiwe njengento engenamsebenzi. Ezi njongo zengqondo ...
Zama ukuba unqabile kangangoko kunokwenzeka ngomama kamyeni wakhe ekhaya. Musa ukukhuthaza umyeni wakho ukutyelela unina yedwa. Kodwa kukulungele ukuyeka ngokupheleleyo ubudlelwane - oku kuya kukwandisa nje ukujongana kwakho. Kungcono ukuba umema umkhwekazi kaninzi ukukutyelela. Kwintsimi yamanye amazwe, uya kuziva engathembekanga. Kwaye ukubonakala kwendlu yakho eyomeleleyo yentsapho iya kumenza amkele ukuba unyana wakhe unobomi bomntu, apho "isatifikethi somhlaba" asisebenzisi.
Kukho uhlobo oluqhelekileyo lomona - xa umfazi ekhwele bonke abantu ngaphandle kokungabikho kwimeko yabo yangaphandle, kungakhathaliseki ukuba besini kunye nobudala. Ubungqineli bomlingiswa wakhe kukuba nguye owenza konke ubomi bakhe. Njengomntwana, unomona ngutitshala kumfundi ofunda naye, kunye nodadewabo omncinci kubazali bakhe. Ukuba ngumntu omdala, ummelwane onomona ukusuka kumzantsi ukuya kummelwane kwicala, umphathi - umlingane kunye nomzalwana omdala-wakhe nomfazi. Kwaye, ke, ukuba lo mfazi uba ngumkhwekazi, uya kuqiniseka ukuba umona ngonyana wakhe kukhethiweyo wakhe. Ngelishwa, kunzima kakhulu ukulahla le mvakalelo kunokuba ube nomona "ngothando". Apha, ukutya ngenxa yomona kuhlala njalo-khangela nje uze ukhethe enye into yokuzivocavoca kwi-masochism. Le yimeko eqhelekileyo apho umama-mkhwenkwe nomalokazana-ingqondo yezobudlelwane ngokusekelwe kwenzeni-kunikwa ingqalelo enkulu kwiingcali.
Njengoko kuchaziwe ngasentla, iingcali zengqondo azicebisi iingqondo ze-psychologists ukuba zivumele indoda yakhe ihambe yedwa ityelele umnina wayo. Kodwa kulo mzekelo, isincomo siya kuhambelana ngqo. Vumela umyeni wakho atyelele umama wakho uhlala wedwa. Makhele umama-mkhwenkwe ngokupheleleyo kwinkampani yonyana wakhe. Ngaloo ndlela, umyeni wakho unokunyanzela umona wakhe umkhwenkwe aze enze izinto ezifunekayo ukuze uhlale uxolo.
Ibhinqa lolu hlobo aluqinisekanga ngalo. Kubonakala kuye ukuba ngumntu ongenakukhuseleka ukuba ngaphandle kwendoda enamandla ayinakuphila ngosuku. Kodwa iimeko zinjalo ukuba igxalaba lilandele into ethile kwaye kukho-ngezizathu ezahlukeneyo. Mhlawumbi ngokwenene ungumntu onesizungu-umama ongatshatanga, oqhawule umtshato okanye umhlolokazi. Okanye mhlawumbi unomyeni osemthethweni okanye umhlobo onobubele, kodwa inxaxheba yethemba kunye nenkxaso ayikho kakuhle. Kodwa umfazi obuthathaka unomntwana ongatshatanga ophethe iisanti ezinzima zokutya, umthabatha eklinikhi aze ahlangane naye kufuphi ne-metro xa ebuya kwiindwendwe ebusuku. Ewe, lo mfazi uza kuthethana njani nomalokazana, ngubani oza kuthatha ixesha lonyana wakhe aze athathe inkwenkwe enenkathalo ngaphandle kwentsapho?
Yenza njalo ukuba uninazala ungaziva utshintsho kwisimo sakhe njengomgcini. Qhubekani ukumzisa ukutya, ukulungisa i-plumbing kwaye ubone indlu yakhe xa ekutyelele. Yaye ungakhubeki kumyeni wakhe, ukuba emva komsebenzi uhambele unina ihora okanye ezimbini. Ukuba umama-mkhwenkwe uyaqonda ukuba ingqalelo ye-filial ayizange ibe yinto encinane, iya kuqala ukukuphatha ngokufudumele.
Ngenxa yokukhuliswa kwakhe kwentsapho, lo mfazi, ngentando yonke, akakwazi ukuvuma nokuvunywa zonke izizukulwana ezalandelayo. Iimvalo ze-ear-ear studded-earned of the daughter-in-law uziva njengento yokuhlambalaza, kwaye umbala obomvu wezinwele zakho uya kuba sizathu esingenasisiseko sokubhengeza ukuba ungeyonto engxenyeni yakhe. Akagcini nje ukungaziqondi izinto zakho zomculo kwaye uzijonga ngokuziphatha kakubi zobutsha kwiintlobano zesini. Unjalo umama-mkhwenkwe ulungiselelwe kwangaphambili ukuba intsapho efanelekileyo eneenkwenkwezi zanamhlanje ayikwazi ukudalwa phantsi kweemeko.
Njalo xa uxhulumana nomamazala, musa ukusebenzisa kakubi izimonyo ezicacileyo kunye neengubo zangaphambili. Yaye ngubani owaziyo, kuthekani ukuba i-chiffon yeklasi ifake ngekholeji ye-lace ayithandi kuphela umkhwekazi oqinileyo? Kungenzeka ukuba umyeni wakhe uya kuqala kukumema ngakumbi. Ukutyelela uninazala kunye kunye nokunyamekela umyeni wakhe. Kwaye kwintetho etafileni musa ukuxela "amaxesha amaninzi", ungasebenzisi amagama ukususela kwi-jargon yolutsha. Kungenzeka ukuba ukuziphatha kwakho okuthobekileyo, ekugqibeleni, kuya kunyibilikisa intliziyo yomntu ongahambisani naye.
Ukuvakalelwa komona kubhaliwe ebusweni
Ungabambisa njani ukungabikho komntu ongenatyala?
Ukuba indoda ihlala ithetha, kodwa ingenzi nto?
Ikholiliyo ngebhiya kunye ne-croutons
Indlela yokuphilisa iinwele, izilwanyana zomntu
Indima yomdlalo ekuphuhlisweni kwabantwana
Indlela yokwenza umqolo kunye nomsila wokugcoba
I-Aromatherapy kubantwana: imithetho kunye neendlela zokwenza isicelo
I-Yukrutyania: yintoni enokugqoka i-jeans yabasetyhini kunazo zonke ngo-2015
Kuthekani ukuba iinwele zifakelwa umbane?
Iifomkhadi ngoFebruwari 23, 2018 kunye nemibhalo kunye novuyo
Iklabishi yaseTshayina ngobusi
I sauce e mifuno